क्याथरीन डे मेडिसी: शक्तिशाली फ्रांसीसी रानी
इटालियन-जन्मे पुनर्जागरण चित्रा
क्याथरीन डे मेडिसि, एक शक्तिशाली इटाली रेनासेन्स राजवंशको सदस्य, फ्रान्सको रानी भए, जहाँ उनले शाही शक्तिलाई सहकार्य गरे। उनले फ्रान्सका राजाहरू थिए, प्रत्येक तीन जना छोराछोरीको लागि दर्ताको रूपमा सेवा गरे र उनीहरूको प्रत्येक र आफ्नो छोरी, मार्गीत, जो फ्रान्सको रानी पनि बनेको थियो। त्यो शीर्षकमा, यदि शीर्षक नभएको होइन, फ्रान्सको शासकले तीस वर्षसम्म।
तिनी अक्सर फ्रान्समा क्याथोलिक - ह्युगुनेट संघर्षको भाग, सेन्ट बार्थोलोम डे मस्रासमा उनीहरूको भूमिकाको लागि चिनिन्छन्।
उनको पिता मच्छेली को संरक्षक थिए, र क्याथरीन को मचेल द्वारा सुझाए गए केहि शाही रणनीतिहरु लाई अभ्यास गर्न को श्रेय दिइएको थियो।
पारिवारिक पृष्ठभूमि र जडानहरू
क्याथरीनका पिता लोरेनोज द्वितीय डे 'मेडिसी, ड्यूक ओरबिनो र फ्लोरेंस को शासक थिए। उनको चाचा पोप लियो एक्स थियो, र लरेन्जोजको भतीजा पोप क्ल्यानमेंट VII भयो । Lorenzo का दादाजी Lorenzo डे 'मेडिसी थियो Lorenzo द म्याग्नेटेटेंट।
क्याथरीनको अवैध आधा-भाइ, एलेन्सन्ड्रो डे 'मेडिसी, ड्यूक अफ फ्लोरेंस बने। उनले अस्ट्रियाको मार्गरेटसँग विवाह गरे, चार्ल्स वी को एक अवैध बेटी, पवित्र रोमन सम्राट। (एलेन्सन्ड्रोको आमा सम्भवतः अफगानिस्तानको दास वा दासको सम्भावना थियो, र अल्सेन्ड्रोरोलाई अफ्रिकाका विशेषताहरूका लागि इल मोरो भनिन्छ।)
क्याथरीनको आमा र लरेनोजको पत्नी मेलेलेन डे ला ट्रूर डी एउभरगेन थियो, जसको पिता बोरोबोन परिवारको अंश थियो।
फ्रान्सिसको फ्रान्सिस, तिनका टाढाको सम्बन्ध र पोप बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन पोप लियो एक्स द्वारा विवाहको व्यवस्था गरिएको थियो। मेडिलेनकी ठूला बहिनी, एनी, एउभरगेनको जन्म दिए र ड्यूक अल्बानसँग विवाह गरे, तर उनी बेपत्ता भए र उनको सम्पत्ति क्याथरीन द्वारा जन्मिएको थियो।
मेडलीन को केही समय पछि कैथरीन ले 13 अप्रिल, 15 191 मा जन्मेका हुन सक्छ, सम्भवतः पुर्वेरिक बुखार, प्लेग वा सिल्लििस बाट उनको पति बाट सम्झौता भयो।
Lorenzo को थोडा देर के बाद, शायद सिफिलिस से, कैथरीन एक अनाथ छोड़ दिया। (उहाँको मकमा मिशेलान्गोलो द्वारा एक मूर्तिकला शामिल छ।)
उनी आफ्ना चाचा, पोप लियो एक्सको निर्देशनमा नुनद्वारा शिक्षा पाएका थिए उनी पढ्न र लेख्न र पोपको दिशा अन्तर्गत नुन द्वारा क्लासिकल शिक्षा दिए।
विवाह र बच्चाहरु
1533 मा, क्याथरीन 14 थियो जब, त्यो हेनरी, फ्रान्सका राजाको दोस्रो छोरा, फ्रान्सेन्स आई, र उनको रानी सहकर्म, क्लाउडसँग विवाह भयो। क्लाउड लुइस XII को छोरी र ब्रिटनी एनी थिए । सालिक कानूनले सिंहासनमा आफूलाई विरासतबाट क्लाउड निषेधित गर्यो।
विवाहको पहिलो वर्ष हेनरी प्रायः अनुपस्थित थियो। पोप क्ल्यानमेन्टको मृत्यु हुँदा, कैथरीनको समर्थन हरायो, र त्यसो भए उनको दहेज। विवाह धेरै खुसी थियो। हेनरीले खुसीसाथ मालकिन राखे, र 1534 पछि विशेष गरी डिएन डे पोइटियर्सलाई मन पराए। दम्पतीले दस वर्षको लागि बच्चाहरू थिएनन्।
1536 मा, हेनरीको ठूलो भाइ फ्रांसीसी मरे, र क्याथरीनले ड्युपिन भए। अदालतमा संदेह थियो कि उनको उपस्थितीले फ्रान्सिसलाई जहर गर्यो। गर्भवती हुने उनको असफलता भनेको हो कि उनीहरूले हेरार्नीको हेनरी र वेलोइसको घरको रूपमा 14 औं शताब्दीदेखि फ्रान्सेली शासन गरेका थिए।
हेनरीले आफ्नो क्यामेरामा 1537 मा एक छोरी बन्न पछि क्याथरीन राखेर विचार गरे। क्याथरीनले एक चिकित्सकलाई सल्लाह दिए जसलाई केहि असामान्यताहरु लाई अनुकूलन गर्न केहि सुझाव दिए। उनले पनि परामर्श गरे र ज्योतिषी को सल्लाह पछ्याए (त्यो नोस्ट्रादमस को संरक्षक थिए)। 1543 मा, उनले अन्ततः गर्भ गरे, र उनको पहिलो पुत्र, फ्रान्सेन्स 1544 मा हेनरीको बुबा र दिदी भाइको नाममा बोलाइन्।
फ्रान्सेलीको जन्म पछि कैथरीनले ह्यानाथनमा नौ जना छोराछोरीलाई बोलाइन्, र तिनीहरूमध्ये6जना शिशु जन्मे। जुत्ताहरू असर नगरेपछि अरू छोराछोरीहरू थिएनन्, जब चिकित्सकहरूले आफ्ना छोराछोरीको हड्डी तोडेर आफ्नो जीवन बचाउथे, त्यसपछि त्यसो कि जन्मेको थियो, र अर्को जुत्ता दुई महिना भन्दा कम भयो।
हेनरीले आफ्नो सम्बन्धलाई मालकिन र विशेष गरी डिएन डे पोइटियर्सको साथ राखे।
हेनरीको शासनमा कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट क्याथरीन बन्द भएको थियो, यद्यपि हेनरीले राज्यका विषयमा सम्बन्धित डिएनलाई सल्लाह दिए। जब क्याथरीनले एक विशेष घरको लागि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरे, हेनरीले यसलाई क्याथरीन दिए।
हेनरीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो छोरा र दाबुन, फ्रान्सिस, मरियम र स्कट्सको रानीको बिचमा राखेका थिए, जसको आमा हेनरीको साथीको फ्रान्सिस, ड्यूकको गुइजको बहिनी थियो। मरियमको आमा, गिइस मैरीले स्कटल्याण्डलाई शासन गरेपछि मैरी र स्क्याट्सको रानी, ​​फ्रान्स आइपुग्दा डेभेन हुन बन्न पुगे।
1559 मा, एक जौस्ट म्याचमा दुर्घटना पछि हेनरी मरे। क्याथरीनले उनको सम्झनामा एक प्रतीकको रूपमा एक टुक्राको टुक्रालाई ग्रहण गर्यो, र शोकमा कालो लगाउन जारी राख्यो।
सिंहासनको पावर: फ्रान्सेस II
क्याथरीनको सबैभन्दा जेठो छोरा 15 वर्ष भयो। ड्यूक को गाउज र लोरेन को कार्डिनल को शक्ति ले लिया, कैथरीन को रेजेंट को नाम दिए को बावजूद। क्याथरीनले डेथ डे पोइटियर्सलाई घरबाट क्याथरीन चाहियो, र डायनबाट शाही गहनाहरू खारेज गरेर केही शक्ति उत्पन्न गरे। ग्यारेज परिवारले प्रोटोटेटिस्टवाद माथिको क्याथोलिकवादलाई बढाए, कैथरीनले आफूलाई मध्यमको रूपमा नियुक्त गरे। प्रोटेस्टेंटहरूमा ग्यास आक्रमणपछि धेरैजना मरेका थिए, कैथरीनले फ्रान्सेलीको चाँसेरसँग काम गर्ने नीतिलाई निजी प्रोटेस्टन्ट उपासनालाई सहन सकेन।
फ्रान्सिस 1515 डिसेम्बरमा मात्र, 16 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो, बच्चाहरू उहाँलाई सफल हुन सकेनन्। उनको विधवा अर्को वर्ष अगस्टमा स्कटल्याण्डमा फिर्ता पठाइएको थियो।
सिंहासनको पावर: चार्ल्स आईएक्स
फ्रान्सिस कैथरीनको सबैभन्दा जेठो छोरा भएको थियो। फ्रान्सिस पछि दुई छोरीहरू, एलिजाबेथ र क्लाउड, र त्यसपछि एक छोरा, लुईस, जो दुई वर्षको उमेरमा मरेपछि मृत्यु भएको थियो।
लुईस पछि जन्मेका चार्ल्सले जन्मदिन 1550 मा जन्मे।
जब फ्रान्सेली द्वितीय मृत्यु भयो, उनको अर्को जेठो जीवित भाई चार्ल्स आईएक्सको रूपमा राजा भयो। उहाँ केवल नौ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। यो समय कैथरीनले धेरै शक्ति र संरक्षणलाई नियन्त्रण गर्यो। चार्ल्स को अल्पसंख्यक को समयमा, क्याथरीन ले कैथोलिक र प्रोटेस्टेंट्स को साथ मिलन कोसिस गरे, तर ड्यूक गाउज द्वारा शुरुवात वासी को नरसंहार, 74 प्रोटेस्टेंटहरु को पूजा मा, फ्रांसीसी युद्ध को धर्म शुरू गरे।
जब ह्युगुनेट्स इंग्ल्याण्डसँग सम्बद्ध भए, क्याथरीन र शाही सेनाले फेरि आक्रमण गर्यो, र कैथरीनले युद्धको एक वार्तालापको अन्त देख्यो।
1563 मा, चार्ल्स आईएक्स लाई शासन गर्न उमेर घोषित गरियो, तर अधिकतर शक्ति कैथरीन हात मा राखयो। Huguenots संग युद्ध जारी छ। क्याथरीनले 1570 मा पवित्र रोमन सम्राट, मैक्सिमिलिआई द्वितीयको एक छोरीलाई विवाह गरे र ह्युगुनेट्ससँग शान्तिको प्रयासमा विवाह गरेकी थिइन्, उनको छोरी, वारिसको मार्गरेट, र हेनरिक तेस्रो नेवर, बीच जेन डी Albret , एक Huguenot नेता र उनको बहन मारुगेराइट Navarre द्वारा फ्रान्सिस फ्रान्सिस को भतिजी। क्याथरीन आफ्नो छोरी मा निराश भएको थियो जब उनले पत्ता लगाए कि मार्गरेट ड्यूक को ग्यारेन्टी संग एक सम्बन्ध भएको थियो, र उसलाई पीटा थियो। नेदरल्याण्डको हेनरी फ्रान्सेली सिंहासनको उत्तराधिकारमा थियो, र उनको छोरीको लागि एक राम्रो मिलान, कैथरीनले आकलन गरे।
जून 1572 मा हेनरी र मार्गरेट को विवाह को धेरै ह्युगुनेट नेताहरु को उपस्थिति, कैथरीन को लागि एक अवसर थियो Huguenot नेताहरु को केहि दिन पछि, को रूप मा, जो सेंट
बार्थोलोम्यु नरसंहार, पेरिसमा हत्याको एक हप्ता बजेटको चर्च घन्टीहरूको संकेतको साथ सुरु भयो, त्यसपछि त्यसपछि फ्रान्स मा फैलियो।
चार्ल्स आफैले आफ्नो आमाबाट अलग रह्यो, सम्भवतः आफ्नो सानो भाइ, हेनरी, स्पष्टता क्याथरीनको मनपर्ने छोरालाई आफ्नो नजिकताको जलन। तर क्याथरीनले यसलाई शासन गर्न सजिलो पार्यो, किनकि चार्ल्सले राज्यको काममा केही चासो राखेका थिए।
चार्ल्सको मई, 1574 मा चार्ल्स मरे। उनीसित कुनै वैधानिक छोराहरू उहाँलाई सफल हुन सकेनन्। उनको छोरी, मेरी एलिजाबेथ, 1572 देखि 1578 सम्मको थियो। उनको असोज्य छोरा, चार्ल्स 1573 मा जन्मे, क्युरिनेन डे मेडिसेसीबाट भूमि र शीर्षक विराटनगर, एवर्गेनको गणना भयो र एङ्गुलेमे को ड्यूक।
सिंहासनको पछि पावर: हेनरी तृतीय
जब उनको भाइ, चार्ल्स, वैध पुरुष वारिस बिना मृत्यु भयो, हेनरिक 1575 मा फ्रान्सेली राजा भयो। कैथरीनले केही महिनाको लागि रिजर्भेसन गरे र हेनरी पोल्याण्डबाट फर्किए। क्याथरीनले चार्ल्स शासनको समयमा धेरै भूमिका खेलेका थिए, विशेष रूप देखि एक यात्रा प्रतिनिधि, यद्यपि उनी कैथरीनका दुई पुराना छोराहरु जस्तै राजा बने।
उनको आमाले 1570 मा उनको इङ्गल्याण्ड रानी एलिजाबेथ आइल्याण्डको साथ विवाह गर्ने व्यवस्था गरेका थिए, र जब त्यो असफल भयो, एलिजाबेथको साथ उनको कान्छा छोरा, फ्रान्सिससँग विवाह गर्न कोसिस गरे। एलिजाबेथ, उनको अन्य सुप्रीम कोर्ट गरे पछि, एक समय संग खेले, तर अंततः प्रत्येक संग बारी संग विवाह को योजनाहरु लाई त्याग्यो।
1572 मा, हेनरीलाई पोल्याण्डको राजा र लिथुआनियाको ग्रैंड ड्यूक को रूपमा निर्वाचित गरिएको थियो, तर तिनले भेट्टाएपछि तिनको भाइ मृत्यु भएको थियो। उनको कोलोनेशन 1575 फेब्रुअरीमा भएको थियो, र अर्को दिन उनले लोरेन लोरेनसँग विवाह गरे। उनीहरूको कुनै छोराछोरी थिएन र हेनरीले लुइसको लागि प्रसिद्ध रूपमा अव्यवस्थित थिए। त्यहाँ केही अफवाहहरू थिए कि उनी समलैंगिक थिए र पुरुष प्रेमीहरूसँग महिलाहरूसँग भोगेका थिए, यद्यपि यो रणनीतिक रूपमा उहाँका शत्रुहरूले फैलिएको हुन सक्छ।
क्याथरीन, कम शक्ति संग जब उनको अन्य छोराहरु राजा थिए, फेरि उनको शासन को घटनाहरु मा पनि यस छोरा को एक सक्रिय सलाहकार को रूप मा सेवा गरे।
1584 मा, हेनरीको मात्र बाँकी बाँकी भाइ, फ्रान्सेन्स, तपेदिकको मृत्यु भयो, नवरायरी हेनरी बनाएर आफ्नो हेनरीको बहिनी (र क्याथरीनकी छोरी) मार्गीटले सालिक कानून अन्तर्गत अर्को पुरुष वार विवाह गर्नुभयो। क्याथरीन र मार्गरेट लड्यो, जस्तै मार्गरेट फ्रान्स फर्कियो र प्रेमीहरू लिनुभयो। क्याथरीन र तिनका छोरा सन्याले 1566 मा मारगरेट जेल सजाय गरे र उनको अन्तिम प्रेमीलाई क्रियान्वित गरे। क्याथरीनले मार्गीटले आफ्नो इच्छाबाट लेखे।
राजा हुनुभन्दा अघि, हेनरी एक फ्रांसीसी सेना नेता थिए, र ह्युगुनेट्स संग केहि युद्धहरुको अंश थियो। क्याथरीन एकदम अधिक वजन थियो र गाउ संग पीडा भयो, र यसले उनको अदालत मा सक्रिय प्रभावशाली हुन को कम गर्यो। ड्यूक गाउजको निजी बैठकमा 1588 हेनरीले जिम्मेवार जिम्मेवारी पाएका थिए जसमा ड्यूक र तिनको भाइ, एक कार्डिनल, हत्या भएको थियो। क्याथरीनले पाटीको विवाहमा बिरामी बिर्सने पछि यो भेट्टाइयो। उनी ड्यूक गाउजको हत्यामा आफ्नो छोराको भागको समाचारमा विनाश भएको थियो।
उनी फेफड़ोंको संक्रमणको साथ बिग्रिएको थियो र5जनवरी, 1599 मा मृत्यु भएको थियो, धेरैले विश्वास गरे कि उनको छोराको कारवाही उनको मृत्यु भयो।
क्याथरीनका छोरा हेनरी तृतीय मात्र आठ महिना बाँकी थियो, डोमिनिकन फ्रिरीले हत्या गरे जसले नेरिरेको हेनरीसँग हेनरीको गठबन्धनको विरोध गरे। क्याथरीनका दास नेरिरेन हेनरीले फ्रान्सको राजाको रूपमा सफल भएको, सन् 1583 मा कैथोलिकवादमा परिवर्तन गरेपछि मात्र ताज लगाइएको थियो।
Medici पुनर्जागरण बेटी त्यो कि थियो, र उनको बुबा दाँत, फ्रान्सेली फ्रान्सेली आईबाट प्रेरित, कैथरीनले फ्रान्सलाई चित्रकारी र कला ल्याउन खोजे। तीस वर्षसम्म तिनले आफ्नो छोराका नाममा शासन गरे, तिनले भवन र कलाकार्यमा भित्री रूपमा खर्च गरे। उनले पेरिसमा टिलिरीज पैलेस विस्तार गरे र धेरै असल पुस्तकहरू सङ्कलन गरे। उनले चीन र टेपेस्ट्रीहरू एकत्र गरे। पहिलोमा, तिनले इटालियन कलाकार र आर्किटेक्टमा ल्याए, त्यसपछि इटालियनहरूलाई प्रेरित गरिएका फ्रान्सेली कलाकारहरूलाई समर्थन गरे। फ्रान्कोओ क्लौट, उदाहरणका लागि, क्याथरीनको परिवारका अधिकांश चित्रकार चित्रहरू। उनको अदालत त्यौहारहरु उनको राजकीय स्प्रिंटर को लागि जान्दथे। केवल अदालत त्यौहारहरूले फ्रांसीसी संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न थाल्छन्, वल्लिस राजवंशको अन्त्य पनि कैथरीनले धेरै कलाको बिक्रीको कारणले गर्दा संकटमा पारेको थियो।
प्राचीन इतिहासमा प्रमुख घटनाक्रमहरू
योङ्गले सम्राट झा डि
स्पेनिश डिक्टेटर फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको प्रोफाइल
साइरस द ग्रेट - फारसी अचमेनिड राजवंश संस्थापक
कराकोरम - गिन्गिस खानको राजधानी शहर
कसरी एक एक्सप्रेस वा पेंटरली शैलीमा प्यान्ट गर्नुहोस्
'Hamlet' मा सबै दृश्यहरूको लागि एक गाइड
भिसामा विदेशी दर्ता नम्बर (ए-नम्बर) के हो?
तपाईंको यार्डमा पेडहरू बेच्न गाइड
Geronimo र फोर्ट Pickens
माइक्रोव्युलेकले म्याक्रोभोल्युसनमा नेतृत्व गर्न सक्छ?
जीवनी र कनोर मैकग्रेगको प्रोफाइल
पाक कला मिथकहरू: ईश्वरीय विश्वासको आधारमा?
हिन्दु दर्शन हाम्रो मनको बारेमा भन्छ
Cómo borrar रेकर्ड आपराधिक र संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राज्य अमेरिका
रोटेशन र क्रान्ति के हो?
अमेरिकाको आयकरको इतिहास अमेरिकामा
रबर्ट रोचेनबर्गको संयोजन
लस 10 देखि अधिक ग्राहकहरु को समीक्षा को चेक - यिनी गर्नुहोस र अधिक पढें Estados Unidos (y no latinos)
आकर्षणहरू सिकाउन स्वादिष्ट तरीका
परिभाषा र विश्वासको साथ Gnosticism को एक व्याख्या
विल्मिंगटन विश्वविद्यालय प्रवेश
सम्भावनात्मक अनुकरण (लघु फारम)
Toltec ईश्वर र धर्म
अन्तिम पित्ता आइपुग्यो
क्या एसट लेखन लेखन पदार्थ?
'सम्पादक' बनाम 'Comprender'